सर्दीखोला Archives – Page3of9– Samacharpati
गायिका पार्वती बुढाथोकीको आवाजमा “पाखो बारी अर्मले” भिडियो सहित
पोखरा, १५ असार । २०७६ साल असार १४ गते ,६७ औ मदन भण्डारी जयन्तीको अवसरमा पोखरामा मदन भण्डारी फाउण्डेसनको भेला सम्पन्न भयो । उक्त भेला फाउण्डेसनका केन्द्रीय सदस्य सोमनाथ प्यासीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो । भेला कमरेड मदन भण्डारी प्रति श्रद्धासुमन गरि शुरु गरिएको थियो । उहाँको फोटोमा पुष्प अर्पण गरि अगाडी बढेको भेलाको संचालन भिम कार्कीले […]
हिलो खेल्ने दिन यस्तो देखियो पोखरामा
पोखरा, १५ असार । आज असार १५ । ‘मानो रोपेर मुरी उब्जाउने’ महिना मानिने असारको मध्य दिन आज धान दिवस संगै रोपाईं जात्राका रुपमा मनाउने गरिन्छ । आजको दिन खेतमा धान रोपाईं संगै आपसमा हिलो छ्यापाछ्याप गरेर मनोरञ्जन गर्ने तथा दही चिउरा खाने गरिन्छ । कामको चटारोले थकित भएका किसानलाई दही र चिउराले शक्ति र शीतलता […]
एसईईमा कुन ग्रेड ल्याउनेले कुन विषय पढ्न पाउँछन् ! कति जिपिए आयो भने पढ्न पाइदैन !
पोखरा, १५ असार । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा सहभागी विद्यार्थीको लब्धांक पत्रमा अनुत्तीर्ण लेखिदैन । तर सबै विद्यार्थीले कक्षा ११ मा भर्ना हुन भने पाउँदैनन् । तत्कालिन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले २०७३ असार १५ गते र शिक्षा मन्त्रालयले २०७४ असार ५ गते गरेको निर्णयअनुसार न्यूनतम जीपीए १/६ निर्धारण गरिएको छ । १/६ भन्दा कम जीपीए […]
रत्न शोभामा विद्यालय पोशाक एवम् शैक्षिक सामग्री वितरण
पोखरा, १४ असार । पोखरा महानगरपालिका वडा नं.२८ माझठाना रैकरमा रहेको रत्न शोभामा विद्यालय पोशाक एवम् शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको छ । गुणस्तरीय जीवन नेपाल नामक संस्थाले एक कार्यक्रमका विच शैक्षिक सामग्री एवम् विद्यालय पोशाक वितरण गरेको हो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहन गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवम् पोखरा आन्तरिक राजश्व […]
मगर चलचित्रकर्मी संघको १५ दिने अभिनय प्रशिक्षणको समापन
पोखरा, १५ असार । मगर चलचित्रकर्मी संघ नेपाल, कास्कीको आयोजनामा सञ्चालित १५ दिने अभिनय प्रशिक्षणको समापन गरिएको छ । शुक्रबार आयोजित प्रशिक्षणको समापनका अवसरमा प्रशिक्षणका सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको हो । सो अवसरमा बोल्दै मगर चलचित्रकर्मी संघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मेजन पुनमगरले मगर जाति आफैंमा भाषिक र सांस्कृतिक हिसाबले पनि विविधता भएको समुदाय भएको बताउनुभएको […]
लेकसिटि हस्पिटलको अध्यक्षमा पून टुकलाल नेपाली
पोखरा, १५ असार । पोखरा महानगरपालिका वडा नं.८ बगालेटोलमा रहेको लेकसिटी हस्पिटल एण्ड क्रिटिकल केयर प्रा.लि.को तेस्रो साधारण स भा तथा अधिवेशन शनिबार सम्पन्न भएको छ । अध्यक्ष टुकलाल नेपालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको अधिवेशनले पून टुकलाल नेपालीलाइ नयाँ कार्यकालको लागि अध्यक्षमा चयन गरेको छ । यसै गरी सर्वसम्मत रुपमा चयन भएका सदस्यहरुमा सञ्चालक विष्णु बराल, सञ्चालक […]
पोखरा, १५ असार । लायन्स क्लब अफ पोखरा फेवा वेगनास चौतारीको पद हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । पोखरामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर क्लबका अध्यक्ष विधान गौतमले इलेक्टेड अध्यक्ष टंक ढकाललाई पद हस्तान्तरण गरेका हुन् । लायन्स क्लब अफ इन्टरनेशनल ३२५ बि १ नेपालका एफ डब्लु सि मल्टिपल को–अर्डिनेटर धुव्र बहादुर थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा […]
बजेटले करमा गरेको परिवर्तन र कर शिक्षाबारे प्रशिक्षण
पोखरा, १५ असार । पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्की र आन्तरिक राजश्व कार्यलय पोखराको आयोजनामा शनिबार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७को बजेटले करमा भएका परिवर्तन तथा कर शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराका प्रमुख केशव उप्रेतीले गण्डकी प्रदेशमा प्रदेशलाई चलाउन पुग्ने राजश्व संकलन हुन नसकेको बताएका छन । गण्डकी प्रदेशको राजश्वको योगदान […]
निरमाया दोहोरीले १४ वार्षिकोत्सवको अवसरमा निरमाया सुमधुर सांझ गर्ने
पोखरा, १५ असार । पोखराको पुरानो र चर्चित दोहोरी सांझ निरमाया दोहोरी सांझले आफ्नो १४औ वार्षिकोत्सवको अवसर पारी निरमाया वार्षिकोत्सव सुमधुर सांझको आयोजना गर्ने भएको छ । चिप्लेढुंगामा रहेको निरमाया दोहोरी सांझले आफ्नो स्थापनाको १३ औ वर्ष सफलता पुर्वक पार गरी १४ औ वर्ष प्रवेशको अवसरमा आगामी असार १५ देखी १८ गते सम्म ख्याति प्राप्त […]
पोखराको लेकसाइडमा दुर्घटना, पार्कीङ गरेर राखेको कार कच्याकुचुक्क
पोखरा, १५ असार । पोखराको लेकसाइडमा शनिबार राती कार दुर्घटना भएको छ । लेकसाइड स्थित खहरेमा पार्कीङ गरिराखेको ग १ च ६५५५ नम्बरको कारलाई ग १ च २८७७ नम्बरको कारले ठककर दिएको हो । ओभरस्पिडमा आएको कारले पार्कीङमा रहेको सेतो कार लाई ठक्कर दिएपछि उक्त कार उछुट्टिएर सडक बाहिर पुगेको स्थानियबासीको भनाई छ । मापसे […]
ट्रकमा महिलालाई लिफ्ट दिएर ट्रकभित्रै भयो बलात्कार !
पोखरा, १३ असार । चितवनबाट पोखरा आउँदै गरेको ट्रकभित्रै बलात्कार गरेको आरोपमा दुई जना बलात्कारी पक्राउ परेका छन् । ना १ क ४३४९ नम्बरको ट्रकमा चालक तथा सहचालकले एक अधवैंशे महिलालाई लिफ्ट दिएका थिए । ति महिला माथि बाटैमा जबर्जस्ती करणी गरेकाे आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेकाे हुन् । पक्राउ पर्नेमा मोरङ उर्लाबारीका ट्रक चालक ३१ […]